Ken Follett ga-ede akụkụ nke atọ nke "Ogidi Earthwa" na Seville | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ee, anyi matara na nso nso a: onye edemede Ken Follett dị ugbu a na Seville ka edere ya iji dee akụkụ nke atọ nke "Ogidi nke ụwa". Akụkụ nke atọ a ga-abụ njedebe nke trilogy nke malitere na "Ogidi nke ụwa" (1989) dị ka akwụkwọ mbụ (ọ bụ otu n'ime ndị a na-agụkarị na Spain, site n'afọ ruo n'afọ), na nke gara n'ihu ọtụtụ afọ mgbe nke ahụ gasịrị, nke akụkụ nke abụọ isiokwu ya "A ụwa na-enweghị ọgwụgwụ", bipụtara na 2007.
Dị ka anyị nwere ike ịmata, nke atọ a ga-aga na-ere na mgbụsị akwụkwọ 2017 na n'oge nwere dị ka a nwa oge aha 'Kọlụm Ọkụ ', "Ogidi ọkụ", sụgharịrị gaa na Spanish. Mana dị ka onye ọrụ ibe anyị bụ Alberto Piernas gwara anyị n’edemede ya "You maara aha mbụ nke nnukwu ọrụ akwụkwọ ndị a?" nke a nwere ike ịdịgasị iche dị ka ụbọchị nke ụbọchị ọrụ gọọmentị na-eru nso.
Okwu Ken Follet kwuru: "Nke a bụ akụkọ nledo edebere na narị afọ nke XNUMX na akụkụ nke ihe a na-eme n'obodo a"; "A na-ede akụkọ a n'ọchịchị bara ọgaranya na nke nsogbu nke Elizabeth I nke England na, dịka ọ dị na ọrụ abụọ gara aga, edepụtara ya n'obodo mepere emepe nke Kingsbridge." Maka ugbu a, ụfọdụ saịtị ndị onye dere ahụ gara bụ Real Alcázar, Naval Museum na Katidral. Anyị na-eche na ụfọdụ ndị ọzọ ga-agbaso otu nzọụkwụ ahụ.
Dị ka anyị kwuru na mbụ, "Ogidi nke ụwa" bụ otu n’ime akwụkwọ a na-agụkarị n’obodo anyị, Spain, karịa ọnụ ọgụgụ nke nde isii e rererịrị. dị ka ịchọtara n'omume ọgụgụ nke ndị Federation of Publishers Guild rụrụ.
Ya mere, anyi aghaghi ichere maka mbiputa akwukwo ohuru a ma anyi buru amụma banyere oganihu ohuru nke onye edemede Britain. Anyị ga-amata Seville na akwụkwọ ahụ? Nyere ahụmahụ nke onye edemede maka nkọwa ziri ezi nke ebe, anyị nzọ ihe niile na "ee."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ken Follett ga-ede akụkụ nke atọ nke "Ogidi Earthwa" na Seville
Akwụkwọ ole ka ị ghọtara site na njedebe ha?